OLONA 800 ISAN’ANDRO NO AMPISAKAFOAN’NY INISMA ENY ANTANIAVO
Nanomboka ny 01 Aogositra ary haharitra eo amin’ny 29 na 30 andro eo ho eo ny iray volana masina Ramadan, izay tanterahan’ny mpino Silamo rehetra manerana ny Nosy. Anisan’ny manamarika izany volana masina Ramadany izany koa ry zareo mpikambana ao amin’ny INISMA na “Institut Islamique de Madagascar”, izay manana ny foiben-toerany eny Antaniavo. Nisy ny tafa naton’ireo tompon’andraikitra avy ao amin’ny Inisma tamin’ny mpampahalala vaovao teny amin’ny foiben-toerany ny Alatsinainy 01 Aogositra.
Fantatra tamin’izany fa ao anatin’ity volana masina Ramadany ity dia maro ny asa soa entin’ny fikambanana Inisma hanamarihana izany iray volana izany. Anisan’ireny ny fampiantranoana olona maherin’ny 100 avy any amin’ny Faritra. Fa anisan’ny ezaka lehibe ao anatin’izao Ramadany izao ihany koa ny fampisakafoana isan-kariva, manomboka amin’ny 6 ora hariva, olona manodidina ny 800 isa. Tsy manavaka na saranga, na foko, na atokom-pinoana izy ireo amin’izany fa afaka misakafo eny an-toerana, eny Antaniavao izay misy ny foiben-toeran’ny Inisma avokoa izay olona liana amin’izany. Vary sy loaka izay miovoava isan’andro no atolotry ny fikambanana mandritra ny fotoanan’ny Ramadany. Ny tanjona dia ny fitovian’ny mpanompo Ramadany rehetra, hoy ny tompon’andraikitra.
Nanamarika ry zareo ao amin’ny Inisma fa ahazoana tombontsoa ara-panahy sy ara-batana ny fanaovana Ramadany. Ankoatra ny fifadian-kanina dia tokony hisy ihany koa ny fifehezan-tena. Marihina fa ny INISMA dia niorina tany Morondava ny taona 1982. Amin’izao fotoana dia manodidina ny 12.000 ny isan’ny mpikambana ao aminy manerana ny Nosy. Eo amin’ny 40 eo ho eo kosa no isan’ny foiben-toerana iasan’ny Inisma eto Madagasikara, toy ny any Nosy-be, Mahajanga, Morondava, Antsiranana, Ambilobe, Ambanja, Maintirano, Soalala, Manakara….“Ry Mpino ! voasoratra sy voadidy ho anareo ny fifehezana tahaka ny nandidiana izany tamin’ireo vahoaka tany alohanareo ho vontom-pinoana”, Cour’an 2.183. Io teny nalaina tao amin’ny Korano masina io no hevi-dehibe ifotoran'ireo mpino Silamo eny amin’ny INISMA, mandritra izao fankalazana ny vanim-potoanan’ny Ramadany izao.
Ireo tompon'andraikitra ao amin'ny INISMA; '(Sary : Nanouh)